काठमाडौँको कलंकीमा पठाओ दुर्घटना, चालक र सवारी दुवै जनाको मृत्यु ! - jagritikhabar.com
काठमाडौँको कलंकीमा पठाओ दुर्घटना, चालक र सवारी दुवै जनाको मृत्यु !
काठमाडौंको कलंकीमा पठाओ स्कुटर दुर्घटना हुदाँ चालक र सवारी दुबै जनाको मृत्यु भएको छ ।
कलंकीको सिता पेट्रोल पम्प नजिक अपरान्ह् पौने पाँच बजे ओम जनता यातायातको बसले पठाओ स्कुटरलाई ठक्कर दिदाँ दुवै जनाको मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको हो ।
मुत्यु हुनेमा धादिङ घर भइ अहिले थानकोट बस्दै आएका अन्दाजी ३५ वर्षका स्कुटर चालक रामबहादुर आचार्य रहेका छन् भने बाँके घर भइ अहिले इमाडोल बस्दे आएका ५२ वर्षका यादबकुमार शाह रहेका छन् ।
कलंकीबाट बल्खुतर्फ जादैँ गरेको प्रदेश ०३–०२–०१४ प ७४६३ नम्बरको स्कुटरलाई विपरित दिशा बल्खुबाट कलंकितर्फ आइरहेको प्रदेश ०३–०१–००५ ख ९३०० नम्बरको भाडावाला बसले डक्टर दिएको थियो । भाडावाला वस र स्कुटर महानगरीय प्रहरी वृत कालीमाटीको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
तीन महिनमा वस्तु आयात १२.७ प्रतिशतले घट्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तीन महिनामा कूल वस्तु आयात १२.७ प्रतिशतले घटेर रु दुई खर्ब ९२ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १०.३ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ६.६ प्रतिशत, २६.९ प्रतिशत र १९.० प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा सोयाबिन तेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा, खाने तेल, कोइलालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पाटपुर्जा, हवाईजहाज तथा पाटपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पाटपुर्जा, कच्चा पाम तेललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
निर्याततर्फ सुक्खा बन्दरगाह, कैलाली, कञ्चनपुर र रसुवा भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट गरिएको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । आयाततर्पm भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, कृष्णनगर र कैलाली भन्सार कार्यालयबाहेकका नाकाबाट भएको आयातमा ह्रास आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा १५.१ प्रतिशतले घटी रु दुई खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा १२ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १०.६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
आव २०७७÷७८ को तीन महिनामा कूल वस्तु निर्यात १४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३१ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात १४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः १९.४ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्पm ५३.२ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा जुटका सामान, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य), चाउचाउ, अलैँची, पश्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, हस्तकलाका सामान, छालालगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
सो अवधिमा चालु खाता रु ३४ अर्ब ३६ करोडले बचत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु २२ अर्ब ४७ करोडले घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ करोड ८४ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा रु २८ करोड ८२ लाखले बचत छ । सो अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ३.३ प्रतिशतले कमी आई रु तीन अर्ब ५६ करोड कायम भएको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २६.८ प्रतिशतले कमी आई रु दुई अर्ब ९२ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर रु तीन अर्ब ६८ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु तीन अर्ब ९९ करोड थियो ।
त्यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब एक अर्ब नौ करोडले बचत छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु १४ अर्ब ४३ करोड बचत थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड ७८ लाख बचत रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ८५ करोड १० लाख बचत छ ।
वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाइयो
कृष्णपुर नगरपालिका–४ बेलकुण्डी वन क्षेत्रको नदी उकास जग्गा कब्जा गरी अवैधरूपमा बनाइएका झुपडी आज हटाइएको छ । सबडिभिजन वन कार्यालय वाणीका कर्मचारी, प्रहरी र हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताको प्रयासमा अवैधरूपमा बनाइएका झुपडी हटाइएका हुन् ।
वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ३० भन्दा बढी घर टहरा हटाइएको सबडिभिजन वन कार्यालय वाणीका कार्यालय प्रमुख बालमुकुन्द भट्टले बताउनुभयो । “घरटहरा निर्माण गरिएको क्षेत्रमा सिमेन्टका पिलरसहित गरिएको तारबारसमेत हटाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक यस क्षेत्रको अतिक्रमण हटाएर जान्छौँ । पुनः जग्गा अतिक्रमण गरिन्छ । वन क्षेत्र जोगाउन निकै चुनौती छ ।” सामुदायिक वनका उपभोक्ता र ताल संस्थाले पटक–पटक यस क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरे पनि जग्गा माफियाले लगाएका बिरुवा उखेलेर फाल्ने गरेका छन् ।
अतिक्रमणमा पर्ने गरेको ५७ बिघा जग्गा नदी उकास क्षेत्रको रहेको छ । जग्गा माफियाले यस क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्र्दै आएका छन् । “अतिक्रमण हटाउन जाँदा नयाँ व्यक्तिलाई ल्याएर राखेको देखिन्छ”, कार्यालय प्रमुख भट्टले भन्नुभयो, “घर टहरा कुर्नका लागि वृद्ध व्यक्ति वा अशक्तलाई राखिएको हुन्छ ।” जग्गा खरिद बिक्री गर्ने माफियाको खोजी कार्यमा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
अतिक्रमण नियन्त्रण गरी साविकको वन क्षेत्रको जग्गा कायम गर्नका लागि टे«न्च निर्माण गर्ने कार्य केही दिनभित्रै सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । अतिक्रमणमा पर्दै आएको नदी उकास क्षेत्रको जग्गामा ३५ परिवारमुक्त कमैयालाई पुनःस्थापन गरिएको थियो । नदीको बाढीले पुनःस्थापन गरिएका मुक्त कमैयाका ३० परिवार विस्थापनमा परेपछि सरकारले अन्यत्र पुनःस्थापन गरेको छ । पाँच परिवार त्यस क्षेत्रमा जग्गा भए पनि एक परिवारमात्रै त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएको छ ।